EyeThupha 17, 2018 admin
Binance & LCX ukudala iqonga exchange crypto-eyake e Liechtenstein
Liechtenstein Cryptoassets Exchange isebenzisana Binance ukuba okuqalisa iqonga wotshintshiselwano crypto-eyake e Liechtenstein. Eli qonga liza ekuqaleni ukunika urhwebo phakathi Swiss Francs kunye Euro nxamnye Bitcoin, ukudibanisa ngababini ngaphezulu ukuthumela neemvume zommiso.
Iqela abanamava Binance uya uyisebenzise le iqonga & kuba noxanduva nokulondolozwa kweqonga. Iqela LCX iya kubonelela imisebenzi inkxaso efunekayo kuquka inkxaso kubathengi, izidingo zomthetho, KYC and AML. le CEO & Umsunguli of Binance, Changpeng Mark uthe: "Ndiyakholwa Binance LCX iza kudala ezinzileyo ethembekileyo yesango eyake-crypto-mali zobungcali rhoqo ngokufanayo. Ndiyathemba Binance LCX uya kuzigxotha imigangatho emitsha ezimqoka kunye nokuthotyelwa kushishino blockchain le. "
Coinbase iifayile patent kulayisho Bitcoin inkqubo iintlawulo
A Coinbase patent elisandula kupapashwa ichaza indlela yokwenza Bitcoin ezithengwa ekhuselekileyo kubathengi, usebenzisa portal yentlawulo leyo kuvumela abasebenzisi ukuba ahlawule usebenzisa Bitcoin ngqo isipaji zabo yesuntswana. “Kusenokuba kukho inkxalabo yokhuseleko kubasebenzisi ukuba izitshixo angasese iidilesi zabo Bitcoin nokuba ibiwe evela izipaji zabo,” le patent lowu. “iinkqubo ezikhoyo musani ukubonelela ngesisombululo ukulondoloza ukhuseleko ngaphezu nezitshixo zabucala ngexesha sivumele abasebenzisi ukuba ujonge kwiphepha zabarhwebi kunye nokwenza iintlawulo besebenzisa izipaji zabo.”
Le nkqubo ubeka i “mkhosi iqhosha” oko kudala izabelo engundoqo zidityanisiwe kwaba yokusebenza iqhosha master - ngokufihlisa kunye nabasebenzisi’ passphrases - enokuthi yenziwe ifumaneke esidlangalaleni noyicime emva kokusetyenziswa. Iqhosha inkosi zokusebenza lisetyenziswa iqhosha elizinyelisiweyo nezabucala ngexesha ekuphumeni, kwakunye ukutyikitya isivumelwano xa intlawulo yenziwe.
Ingxelo Daily Market Kraken for 16.08.2018
$124M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Bitcoin izinga lokuqaqamba hits 50...
EyeNkanga 3, 2018 e 1:27 PM